Wazi njani ukuba urhwebo lwe-Forex luHalal- Funda nge-2 yoRhwebo ngoJanuwari 2022
Wazi njani ukuba urhwebo lwe-Forex luHalal 2021
Xa kuziwa kurhwebo lwe-forex, omnye wemibuzo ebuzwa ngokubanzi ebuzwa ngabalandeli benkolo yamaSilamsi yile: ndazi njani ukuba urhwebo lwe-forex luyi-halal? Ukuba ubuzibuza eyona nto inye, uya kuthi gqi kwiphepha lasekunene.
Nangona ukurhweba ngamaSilamsi kucingelwa ukuba yi-haram, zisekhona iindlela onokuthi urhwebe ngazo ngelixa uhlala unyanisekile kwinkolo yakho. Ewe, i-halal ivumelekile kwaye isemthethweni kwinkolo yamaSilamsi, ngelixa i-haram ingavumelekanga. Ngenxa yoko-umbuzo ngulo: Ngaba urhwebo lwe-Forex halal?
Iindaba ezimnandi kuwe kukuba iiakhawunti zokurhweba ze-halal forex do zikhona, kwaye abaqinisekisi ngenzala yokudlulisa okanye ukutshintsha imali. Ekugqibeleni, oku kubalulekile ukuba urhwebo lwe-forex luthathwe njenge-halal.
I-AvaTrade-eQinisekisiweyo yeBroker ngeeKhomishini eziSimahla
Hlawula iipesenti ezi-0 kuzo zonke izixhobo zeCFD
Amawakawaka e-asethi yeCFD yokuthengisa
Izixhobo zoncedo ezikhoyo
Kwangoko ubeke imali ngedebhithi / ikhadi lekhredithi
Yintoni iAkhawunti yamaSilamsi yokuRhweba?
Kubantu abathembekileyo kwiQuran kwaye bafuna ukulandela imigaqo-nkqubo yezemali yamaSilamsi, ngelixa kwangaxeshanye bazibandakanya nendawo yotyalo-mali ekwi-Intanethi- kukho iiakhawunti zorhwebo ze-halal ezikhoyo. Oku kukwabizwa ngokuba yiakhawunti engatshintshiyo okanye iakhawunti yorhwebo ye-halal.
Iiakhawunti zamaSilamsi azihlawuli nzala. Kungenxa yokuba umthetho weSharia (aka umthetho wamaSilamsi) uyabalela abantu benkolo yamaSilamsi ukusuka fumana inzala kwizipho, kunye hlawula umdla.
Naluphi na unaniselwano ngaphakathi kwezemali zamaSilamsi kufuneka lwenziwe ngokukhawuleza, okuthetha ukuba ukurhweba kwemali engekahlawulwa kufuneka kususwe kwenye isixa kuye kwesinye kwangoko. Ngobunzima, oku kubandakanya naziphi na iindleko zentengiselwano.
Ngaphandle kokuba urhwebo lwe-halal lwe-forex lungabi yinto entsha kraca, akukho baninzi bathengisi-simahla abanikezela abathengi ngeakhawunti zorhwebo zamaSilamsi. Kodwa, kwaye njengoko sigubungela esiphelweni sesi sikhokelo-sikhethe ezona zibalaseleyo kwezorhwebo lwabarhwebi abasebenza ngoku kwimarike.
Nangona kunjalo, sifumanisa ukuba i-akhawunti ye-islamic ye-forex yorhwebo ayipapashwa kakhulu. Oku kunokuba kungenxa yokuba kukho abathengi abambalwa abacela olu hlobo lweakhawunti yorhwebo, kwaye kufuneka kuthiwe, banokuba nembuyekezo encinci yezemali kumrhwebi we-forex.
Isiseko seHalal Trading Forex
Amaqonga orhwebo weHalal forex athatha ukufana okuninzi kwiiakhawunti eziqhelekileyo zorhwebo. Kodwa, ewe, amanqaku athile atshintshelwe ukuhlangabezana nemigaqo esisiseko yezemali yamaSilamsi.
Imigaqo emine yezemali yamaSilamsi imi ngolu hlobo lulandelayo:
Isibonelelo kunye nolwabiwo lomngcipheko
Ukuthintela ukufunyanwa okanye ukuhlawulwa kwayo nayiphi na inzala (i-riba-ngakumbi koku kokuqhubeka nephepha)
Ukurhweba ngokutshintshiselana, ngaphandle kokulibazisa
Iiakhawunti zamaSilamsi zenziwe ngenjongo yokuhlonipha iziseko zezemali zamaSilamsi kunye nokwenza ukuba abantu benkolo yamaSilamsi bakwazi ukufikelela kumgangatho wehlabathi wezorhwebo. Oku kuye kwafuneka ukuba kwenziwe kuba imigaqo-nkqubo emine ekhankanywe apha ngasentla ihlala ingalingani kwisithethe sokurhweba nge-Forex yaseNtshona.
Kubathengi abafuna ukugcina imigaqo-nkqubo yabo yezenkolo ngaphandle kwawo nawaphi na amathuba otyalo-mali, iakhawunti ye-halal yorhwebo yindlela yokwenza njalo. Uhlobo olusisiseko lokuthengisa kwangaphambili lunokuthathwa njenge-halal, njengoko ngokwenkcazo ayihambelani nemigaqo esisiseko yezemali yamaSilamsi.
Ukurhweba kwangaphambili-iHaram okanye iHalal?
Xa kuziwa kwi-forex, izinto ezithengiswayo, amasheya, ikamva kunye nolunye udidi lweeasethi ezithandwayo, abantu benkolo yamaSilamsi bahlala bezibuza ukuba urhwebo yiharam okanye halal. Ukuthathela ingqalelo inkqubela phambili yorhwebo ntengiso, kwaye inyani yokuba ikota yehlabathi ilandela inkolo yamaSilamsi, ayimangalisi into yokuba umxholo wentengiso yotyalo mali kwi-Islam iphakanyisiwe ngakumbi nangakumbi.
Kananjalo, eli candelo 'lethu lokwazi ukuba ukurhweba kwangaphambili yiHalal' isikhokelo siza kuphonononga amanqaku awahlukeneyo ngombono. Kwaye ngethemba-uphendula lo mbuzo ubaluleke kakhulu- 'ngaba urhwebo ngeharal halal okanye yiharam?' Ngokufunda imarike ye-forex kwaye okona kubaluleke kakhulu, zizenzo zayo; Siza kukubonelela ngeengcebiso zokuba zeziphi izixhobo zezezimali ezivunyelwe ukuba zithengiswe kwaye ungaqinisekisa njani ukuba uhlala ungumrhwebi we-halal, ngelixa ulandela umthetho weSharia.
Ke, urhwebo lwe-forex lutsala abathengisi abaninzi nangakumbi mihla le kwaye yindlela entle yokwenza inzuzo. Ewe abalandeli benkolo yamaSilamsi are bayakwazi ukujonga imeko yabo yezemali (kunye nokunye), ngelixa behlonipha iziseko zezemali zamaSilamsi.
Ngenxa yenyani, urhwebo lwe-forex ngokuyintloko kukuthengisa kunye nokuthengwa kweemali, kunokuba kubonakale ngathi eli iya kuba lithuba elikhulu lokutyala imali. Kukho ezinye izinto ezimbalwa ekufuneka zithathelwe ingqalelo. Umzekelo omnye wendawo engwevu kule meko inokuba yeyokuthenga idola yaseMelika ngokuchasene nedola lase-Australia, emva koko uyithengise ngomnye umhla-oku kuseyintengiselwano enkulu ye-halal.
Nangona kunjalo, xa kusenziwa, zininzi iingxaki ezinokuvela, esiziphonononga ngakumbi ngezantsi.
I-Forex Riba-yezeMali yamaSilamsi
Xa kuziwa kwisibhengezo esibanzi sokufumana inzala okanye ukuyihlawula, izinto ziya ziba nzima ngakumbi kubantu benkolo yamaSilamsi.
Ewe, i-riba ngesi-Arabhu ithetha 'ukwanda kunye nokugqitha', ngelixa intsingiselo yesiNgesi 'ngumdla'. Ke kumlandeli wenkolo yamaSilamsi, i-riba ithathwa ngokuba iyathintelwa, nangona kunjalo, kukho impikiswano enkulu malunga nokuba yintoni eyi-riba.
Kwimarike yokurhweba kwangaphambili, kuyinto eqhelekileyo ukuba emva kokuvalwa kweseshoni yorhwebo, umtyali mali uya kuvula ezinye izikhundla. Kule ndawo apho umthengisi we-forex aya kuhlawulisa into eyaziwa ngokuba yi 'swap commission'. Oku kuhambelana nomyinge wenzala (imali yokulala).
Eyona ndlela ilula yokuchaza le nkqubo kukuba umthengisi we-forex ukukunike imali mboleko engathanga ngqo (ngokusebenzisa amandla), kakhulu njengayo nayiphi na imali-mboleko, umrhwebi (kule meko umntu obolekayo) uya kwenza inzuzo. Kungenxa yezi zizathu zikhankanywe apha ngasentla ukuba iakhawunti eqhelekileyo yokurhweba kwangaphambili iya kuthathelwa ingqalelo njengeharam- isizathu soku kukuba ukusebenza kubandakanya amazinga emali yenzala (imali yokulala ubusuku).
Ke, ngaba urhwebo lwe-halal yorhwebo? Hayi, kungekudala xa iintlawulo zenzala zingena kwi-equation. Kananjalo, iakhawunti esemgangathweni yokuthengisa i-forex ayisathathelwa ngqalelo njenge-halal.
Nangona kunjalo, ngokuphelisa ukutshintsha kwenzala, iakhawunti yokuthengisa yamaSilamsi iyinyani.
Kungenxa yokuba abantu benkolo yamaSilamsi bayakwazi ukuthatha umboleko-mali ngaphandle kwenzala, ngombono wokutyala imali ukuze wenze inzuzo. Kodwa, imali mboleko, ewe, ihlawulwe ngaphandle kwenzala kulowo ubolekayo. Ukurhweba nge-Halal forex akukho mnyama namhlophe, kwaye ke umthengisi we-forex unokuhlawulisa umthengi ngezinye iindlela, njengokuhlawulisa ikhomishini kunye nezinye iifizi (ukuze enze inzuzo).
Kulapho ezi ntlawulo zinokuthi zithathelwe ingqalelo njengenzala efihliweyo. Xa sele nditshilo, iindidi zabaphandi bayayivuma le ndlela ukuze bancede inkqubela phambili yokurhweba kwangaphambili.
Isandla sokuThengisa i-Forex Halal
Ngoku, ngokubhekisele kutshintshiselwano uqobo, ngaba urhwebo lwe-halal yorhwebo ukuba lwenziwe 'ngesandla'? Ngokusisiseko-ewe, i-Islam iyakuvumela urhwebo, kodwa kufuneka lwenziwe ngesandla. Isandla 'esesandleni' sisivumelwano phakathi komthengisi we-forex kunye nomthengisi. Le ntengiselwano yorhwebo ihlala iqhutywa kwangoko kwaye iyindlela ethe gca yokurhweba.
Abanye abantu bakholelwa ekubeni ulungiselelo luphakathi komrhwebi kunye nomrhwebi, uvunyelwe phantsi komgaqo wokuba ngamaqela amabini ahlukeneyo, enikezela halal. Ibhodi yabaphandi ikwatsho ukuba intengiselwano kufuneka yenzeke xa ikhontrakthi iphelile. Oku kuthetha ukuba imicimbi kufuneka igqitywe kwangoko. Ukuthetha ngokubanzi, abathengisi be-forex benza ukuthengiselana ngemizuzwana, ngamanye amaxesha kuncinci.
Xa kuza ku iinketho yokubini kurhwebo lwe-forex, le yindlela elula yokwenza imali. Kodwa, iinketho zokubini zibandakanya abathengisi abaqikelela ukuhanjiswa kwexabiso lemali (utshintsho lotshintshiselwano lwempahla) -kwaye ngenxa yenzala ehlawulwayo okanye efunyenwe ngentengiselwano enje- le yorhwebo yiharam.
Ngaba ukuRhweba kwangaphambili nguMdlalo weThuba-ke ngoko yiHaram?
Ukungcakaza ngokuqinisekileyo akuvumelekanga kwi-Islam, ngawo nawuphi na umdlalo wamathuba ovaliweyo kwaye uthathelwa ingqalelo njenge-haram. Umbuzo ngulo, ngaba urhwebo lwe-halal yorhwebo ukuba urhwebo lwangaphambili aluqwalaselwa njengomdlalo wamathuba?
Ukurhweba, okuthengisa nokuthenga iiasethi, eyona njongo iphambili yokurhweba kwangaphambili kukwenza imali ngokunciphisa kunye nokunyusa ixabiso leasethi. Umsebenzi womrhwebi kukuzama ukumisela kwangaphambili ukuhla kwexabiso leasethi ngokufunda uhlalutyo.
Ukuze umrhwebi ahlalutye imarike ye-forex yorhwebo, kubalulekile ukuba ube nokuqonda kakuhle izicwangciso kunye neengcamango. Oku kuthetha ukuba utyalomali kulo mbuzo luxhomekeke kakhulu kuhlalutyo lomrhwebi, kwaye ayisiyo nje umdlalo wamathuba-ke ngawo onke amaakhawunti, ayisiyo-haram.
Umngcipheko wezeMali wamaSilamsi kunye noMvuzo - ukuThengiswa kweHalal Forex
Xa kufikwa kumngcipheko ekwabelwana ngawo kurhwebo, eli candelo lilawulwa yimigaqo efana:
UBai bithaman ajil (ukuthengisa ngentlawulo emiselweyo)
UMudarabah (ukwabelana ngenzuzo)
Bai al inah (ukuthengisa kunye nokuthenga kwakhona)
Bai muajjjal (ukuthengisa ngetyala)
Bai salam (intlawulo epheleleyo kwangaphambili)
IMurabaha (indleko-kunye nezemali)
UMusawamah (ixabiso elihlawulwe ngumthengisi alaziwa ngumrhwebi)
Njengomtyali mali, utyala imali kwiasethi. Ukuba ixabiso leasethi yakho lihla ngexabiso, uya kujongana nelahleko
Kwelinye icala, xa ixabiso leasethi likhula, kulapho ke uya kwenza khona inzuzo-okuthetha ukuba zombini iindawo eziyingozi kunye neenzuzo ezifanayo ziyafana xa uqhuba kakuhle ishishini. Xa uyijonga ngoluhlobo, urhwebo kunye nenkolo yamaSilamsi ziyahambelana ngokupheleleyo.
Imali yamaSilamsi- Ngaba ndingathenga izabelo?
Izabelo zokuthenga azijongwa njengeharam, ngenxa yokuba unokuthenga ipesenti kwinkampani. Kusabaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuba inkampani oyithengayo izabelo kwizenzo zomthetho weSharia.
Zimbini iintlobo eziphambili zeenkampani ezisebenzayo, ngokwembono yamaSilamsi:
Imisebenzi yeHaram yokuziqhelanisa: Ukurhweba ngamasheya kuthathwa njenge-haram ukuba inkampani ekuthethwa ngayo isebenza neebhanki, ukungcakaza, utywala okanye i-riba (inzala).
Imisebenzi yokuziqhelanisa neHalal: Iinkampani ezisebenza ngeendlela ezinjengokunxiba, ukuvelisa, ukuthuthwa kolwandle, ukuthengiswa kwezindlu, ifanitshala kunye nokubonelelwa zihlala zithathwa njengezikhululekileyo kwintengiselwano kunye nakwizenzo zeharam.
Kuthathelwa ingqalelo ngabaphandi abathile ukuba usavunyelwe ukutyala imali kwizabelo ukuba inkampani ithengisa kuphela isixa esincinci seenkonzo ezingezizo ezomhlaba kunye neempahla. Ngamanye amagama, inkampani oyityala imali inokuba nokudibanisa imisebenzi, kodwa uninzi lwazo lwamkelwe njengorhwebo lwe-halal.
Kule meko, ukuze ulandele umthetho weSharia kufuneka uthathe nayiphi na inzuzo oyifumene kwicandelo le-haram lenkampani, kwaye unikele ngaloo mali kwisisa. Fokanye umzekelo, ukuba i-15% yenzuzo isuka kwintengiso yotywala, i-15% yenzuzo yakho iyonke kufuneka inikelwe kwisisa esivunyiweyo.
Ukurhweba nge-Forex iiAkhawunti eziMiselweyo - iiKhomishini
Enye yezinto eyenza urhwebo lwe-halal ye-forex inomdla kakhulu kukuba ngokungafaniyo nezinye iiakhawunti eziqhelekileyo zorhwebo, akukho swap inzala evelisiweyo kwaphela. Kananjalo, oku kuyenza emva koko ibe sisiqingatha. Njengoko sichukumisile ukuqhubekeka phambili kwesi sikhokelo, isizathu soko kukuba utshintsho lomdla luveliswa ngumrhwebi oshiya indawo evulekileyo, emva kokuba imarike ivaliwe (ubusuku bonke), iyenza iharam (kuba iintlawulo zobusuku ngobusuku zingena ukudlala).
Ngethamsanqa, iakhawunti yearal forex yokurhweba isusa inzala ebandakanyekayo kurhwebo, evumela abalandeli benkolo yamaSilamsi ukuba bathengise ngokukhuselekileyo kwindawo efanelekileyo yokurhweba kwi-Intanethi. Kodwa, tusacela umbuzo; Njani okanye bahlawula ntoni abathengisi be-forex ngokwekhomishini?
Ewe, abathengisi be-halal forex bahlala behlawula ezi ntlawulo zilandelayo:
Akukho ntlawulo ingentla ihlawulwa ngabanikazi beakhawunti ye-forex yorhwebo ethathelwa ingqalelo njenge-riba haram.
IMetaTrader -Akhawunti yamaSilamsi
Elona qonga lokurhweba lixhaphakileyo kwihlabathi phakathi kwee-CDF ezikwi-Intanethi kunye nabathengisi be-forex liqonga leMetaTrader. Umbuzo ngulo, ngaba iMetaTrader iyazifezekisa iikhrayitheriya zamaSilamsi?
Ngenxa yokuba iMetaTrader liqonga lokurhweba nje, kucingelwa ukuba halal. I-MetaTrader ngokusisiseko sisinxibelelanisi, isixhobo sokurhweba esenza ukuba abathengisi bavule ii-odolo kwintengiso.
Ayinamsebenzi nokuba usebenzisa iakhawunti esemgangathweni yorhwebo, iakhawunti yokuthengisa yamaSilamsi, okanye iakhawunti yenkqubo - iiodolo zakho ziya kwenziwa ngendlela efanayo. Iqonga alisoze liguqule okanye lilungise iimeko zakho zokurhweba xa kufikwa kutyalomali, kwaye ke umthengisi wakho uya kuba nguye oza kuchaza naluphi na utshintsho.
Ekuphela kwento enokuthi ibe nalo naluphi na uhlobo lwefuthe kuwe njenge haram okanye umrhwebi we halal yiakhawunti yomrhwebi we forex othatha isigqibo kuyo. Ngamanye amagama, ungayiphepha inzala ngokukhetha iakhawunti yokuthengisa yamaSilamsi ngomthengisi wakho.
Iiakhawunti zamaSilamsi-Uyenza njani-into kwiNtengiso ye-Forex
Ukuza kuthi ga ngoku kufuneka uzive ukhuselekile kulwazi lokuba kunokwenzeka ukuba abantu benkolo yamaSilamsi bathathe inxaxheba kurhwebo lwe-halal forex ngelixa behambelana nemali yamaSilamsi.
Ngoku siza kujonga iintlobo ezintathu ze izicwangciso zorhwebo oya kuthi ube nakho ukuyisebenzisa kwiakhawunti yakho ye-halal broker akhawunti.
Iakhawunti yamaSilamsi-Ukurhweba ngokuThengisa
Le yenye yeendlela ezintathu eziphambili zokurhweba. Abanye banjalo scalping kwaye urhwebo usuku (Zombini ezi zinto ziya kugutyungelwa ngokulandelayo).
Into yokuqala oza kuyithetha nale yile yokuba ukuba ufuna ukuhlala uhlonipha imali yamaSilamsi ngaphandle kokukhathazeka, kuya kufuneka usebenze ngokukodwa ngeakhawunti yamaSilamsi. Le kuphela kwendlela yokuphepha ukuhlawula nayiphi na inzala.
Ukurhweba Kucingelwa ukuba ngowona mngcipheko mncinci kutyalo mali oludwelisiweyo, kuba kubandakanya ukuvula izikhundla zayo nantoni na ukusuka kwiintsuku ukuya kwiiveki. Nangona kunjalo, iakhawunti yorhwebo engatshintshi-ibaluleke kakhulu kule nkalo.
Ukuba akunjalo, kuhlala kukho umngcipheko wokuba umrhwebi angavula indawo ekuqaleni kosuku, ngenjongo yokuyivala ngaphambi kokuba imarike ivalwe, alibale kuphela. Ukuba kule meko, ubuneakhawunti esemgangathweni, ukuze uhlale uhloniphekile kwimigaqo yezemali yamaSilamsi (oko kukuthi akukho zinga lenzala livunyelweyo), kuya kufuneka uyeke nayiphi na inzuzo eyongezelelweyo yemali.
Ukuba njengomrhwebi uneakhawunti yamaSilamsi, uya kuba nakho ukonwabela naziphi na izibonelelo ezivela kweli thuba lokurhweba.
Iakhawunti yamaSilamsi-ukuThengisa koMhla
Ukuthengisa kwemini kubandakanya izikhundla zokuvula eziza kuvalwa ngaphambi kokuphela kosuku lokurhweba (kulapho ukuvalwa kweemarike).
Ngethamsanqa, ukuhlawulwa kweeKhomishini eziguqulweyo kuguqulwe ngorhwebo losuku. Kungenxa yokuba iindawo ezivulekileyo azihlali ebusuku. Kuyafana nakweyiphi na iakhawunti yokurhweba. Kwakhona, kusafuneka uqinisekise ukuba awugcini indawo yokuthengisa yosuku oluvulekileyo kwiiyure ezisemgangathweni ezidlulileyo, kuba oku kuyakwenza umdla (ukuba ubusebenzisa iakhawunti engekho kwi-halal).
I-Scalping lolunye uhlobo lokuthengisa, kufana nokuthengisa nge-intraday. I-Scalping ibandakanya ukuvula iindidi zezikhundla ezincinci, kwaye nganye iya kuvala kwimizuzu, okanye kwezinye iimeko imizuzwana. Ezi zikhundla zenzelwe ukuvalwa ngesantya esikhawulezayo (kufana nokuthengisa nge-intraday). Oku kuthetha ukuba akuyi kubakho zinga lenzala lisetyenziswayo njengoko livula kwaye livala ngexabiso elikhawulezayo.
Oku kukwathetha ukuba umrhwebi ongumSilamsi otywalayo, uyakwazi ukusebenzisa iakhawunti eqhelekileyo yokurhweba ngaphambili. Ngamanye amagama, iakhawunti yokurhweba yamaSilamsi ayifuneki ngentetho nganye-kodwa oku kukwimeko yokuba akukho zithuba zihlala zivulekile ubusuku bonke.
Ngokufana nokuthengisa nge-intraday, ukuba ufuna ukugcina isikhundla sakho ixesha elide, uya kuba ngcono ngakumbi xa usebenzisa iakhawunti yamaSilamsi ukunqanda ukuhlawula inzala.
Isizathu soku kukuba xa isikhundla kunokwenzeka ukuba sijike sibe sisikhundla sexesha elide, siyakwandisa inani lezibonelelo ezinokubakho. oku kuya kuthetha ukuba awuzukukhetha ngaphandle kokunciphisa isikhundla sakho ngaphambi kokuba uqale ukuhlawula inzala.
Kulungile Iiakhawunti zeNtengiso ye-Forex-Izibonelelo
Enye yeenzuzo ezinkulu zokusebenzisa iakhawunti yokurhweba ye-halal yeyokuba kukho ii-commap zero zero commissions ezichaphazelekayo. Kananjalo, unokuqiniseka ukuba urhwebo nge-forex ngendlela ye-halal.
Ngeakhawunti yamaSilamsi, isibonelelo esiphawuleka ngokukhawuleza kukuba akukho zithuba zotshintshiselwano, kwaye ewe, oku kuthetha ukuba uyakwazi ukuvula izikhundla zexesha elide ngelixa uthintela ukubanakho ukunciphisa inzuzo yakho ngenxa yotshintsho lweekhomishini.
Enye yeenzuzo eziphawulekayo xa kuziwa ekusebenziseni i-akhawunti ye-halal forex yorhwebo kukuba unokuvula isikhundla kwisibini semali, kwaye uphephe iindleko ezinkulu zokutshintsha. Ukutshintsha kweendleko kunokuba phezulu kakhulu, ngakumbi xa kufikwa kwiipali zemali ezingaqhelekanga ukuze kuthintelwe oku kuluncedo olukhulu.
Kulungile Iiakhawunti zeNtengiso ye-Forex-Izinto ezingalunganga
Ewe kunjalo, ukungabinakho ukutshintshana kunokubonwa njengongenangxaki kuba ngekhe ukwazi ukuthatha ithuba elipheleleyo lokuhlawulwa kwenzala enkulu enxulunyaniswa nezikhundla ezimfutshane.
Ngokubanzi, ngaphandle komdla umrhwebi ongatshintshiswanga uya kusadinga ukuxhamla kwinzuzo yohlobo oluthile. Ke, oku kuya kuza ngokwendlela yemirhumo yolawulo emiselweyo. Le yindlela iibhanki zamaSilamsi ezisakwazi ngayo ukwenza inzuzo.
Iakhawunti yamaSilamsi-yintoni endikwaziyo ukuRhweba?
Ngeentengiso ezininzi ezikhoyo ukurhweba kuzo, nawuphi na umtyalomali okwangumlandeli wenkolo yamaSilamsi unokuzibuza ukuba zeziphi iiasethi ezithathwa njenge-halal kwaye zeziphi haram.
Ngamanye amagama, ukuze ulandele umthetho we-Sharia xa uthengisa nge-akhawunti yokuthengisa yamaSilamsi, kuya kufuneka uyazi ukuba yeyiphi impahla onokutyala kuyo ukuze ukwazi ukuhlala uthembekile kwinkolo yakho.
Iindaba ezimnandi zezokuba uninzi lweemarike zezemali zithathwa njenge-halal, ngaphandle kwekamva kunye neebhondi.
Inqanaba lenzala elimiselweyo liqala ukudlala ngexesha lokukhutshwa kwaye liya kuhlala linjalo kubukho bebhondi. Kuxhomekeke kunikezelo nakwibango kwintengiso, ibhondi inokutshintsha kwaye itshintshe. Ipesenti yembuyekezo yotyalo-mali (ebalwe ngokwexabiso le-bond) iya kuhlala injalo njengoko imisiwe.
Ngenxa yokuba iibhondi zisekwe kwinqanaba lenzala, iibhondi zithathwa njengeharam. Kungenxa yokuba nangona, umzekelo, ukutyala imali kwi-CFD kuthetha ukuba awuhlawulwanga nayiphi na inzala-isigqibo esigqibayo kukuba ingcambu yokusasazeka isenexabiso lenqanaba lenzala.
Njengokulibaziseka okubandakanyekileyo kwikontrakthi yexesha elizayo, zikwajongwa njengeharam. Le nto ixhomekeke kwinto yokuba ukutyikitywa kwesivumelwano sentengiso akwenziwa kwangoko.
Akukho zinkcukacha zobuSilamsi zichaziweyo ngokokwazi kwethu, oko kuthetha ukuba azikho ezizezona zibalulekileyo kwezemali zamaSilamsi. Sele beyithethile loo nto, basebenza ngendlela efanayo nemilinganiselo esemgangathweni yeebhangqa zemali zangaphambili.
Ukuhla kwezinto apha kuxhomekeke ikakhulu kutshintsho kunikezelo nakwimfuno. Umzekelo, ixabiso ledola yaseMelika liza kucatshulwa ngokuchasene nemali eyahlukileyo yokwenza iperi, kwaye oku kungakhokelela ekunyukeni okanye ekwehleni kwexabiso.
Kwimeko yezemali yamaSilamsi, uyakwazi ukuthathela ingqalelo i-cryptocurrencies halal. Oku kungenxa yokuba i-cryptocurrensets ayixhomekekanga kumaxabiso enzala (nokuba hayi ngokungangqalanga okanye ngokuthe ngqo).
Ezinye izinto ezijongwa njenge-halal zizinto ezinje ngemveliso kunye nesinyithi.
Uyivula njani ifayile ye- Kulungile Iakhawunti yeNtengiso ye Forex
Apha sidibanise indlela elula yokukhokela indlela yokuvula iakhawunti yorhwebo ye-halal.
Fumana iqonga lokuthengisa kwangaphambili olithandayo ngenkangeleko, elinako ukukunika ukufikelela kwiakhawunti ye-Islamic forex. (Abanye abarhwebi baya kuthatha iakhawunti yesiko bayitshintshe ibe yi-halal kuwe, kuhlala kufanelekile ukubuza).
Nika onke amaxwebhu afanelekileyo afunekayo ukuchonga ukuba ungubani.
Imali yedipozithi kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Nje ukuba uhlawule ngemali iakhawunti yakho yorhwebo ngoku ungafaka isicelo seakhawunti yakho yamaSilamsi (esebenza phantsi komthetho weSharia)
Ungalindela ukufumana imvume kwiakhawunti yakho kungaphelanga usuku okanye iintsuku ezimbini. Ukuba uyathandabuza, nxibelelana neqela elizinikeleyo lenkonzo yabathengi kwaye baya kukuvuyela ukuphanda ukulibaziseka kwakho.
Ngoku ungaqala ukurhweba ngeakhawunti yokurhweba ye-halal!
Eyona Akhawunti yeBroker eyiHalal yeOnline ye2021
Nangona amaqonga orhwebo e-forex ngakumbi nangakumbi eqala ukuphonononga ukufaneleka kokubonelela ngeakhawunti ezinikezelweyo, hayi ayenzi njalo. Kananjalo, ukufumana umthengisi we-forex ohlangabezana neemfuno zakho kunye nezenkolo kunokuba ngumceli mngeni. Emva kwayo yonke loo nto, kuya kufuneka ujonge ezinye izinto xa ukhetha iakhawunti yokurhweba yamaSilamsi- njengemirhumo, umgaqo, iindlela zokuhlawula, kunye nezixhasi zemali ezixhaswayo.
Ukukunceda ukukhomba kwicala elifanelekileyo, ngezantsi uza kufumana ukhetho lweeakhawunti zokurhweba ze-halal ezikhokelela kwisithuba se-2021.
1. I-AvaTrade -Iyona Akhawunti ye-Forex yamaSilamsi egqwesileyo yaBarhwebi beMT4
Nangona i-eToro ithandwa kakhulu ngabarhwebi be-newbie, isenokungakulungeli kwabo banqwenela ubunkunkqele. Ngamanye amagama, i-AvaTrade ilungile ukuba unamava okurhweba phantsi kwebhanti lakho, kwaye unqwenela ukufikelela kuseto lwezixhobo eziphambili kakhulu.
Ngokubalulekileyo, umrhwebi ubonelela ngenkxaso epheleleyo yeMT4, ke uya kuba nakho ukufikelela kwizixhobo zokufunda kwitshathi, izikhombisi zobuchwephesha, kunye nokuqonda kwemakethi. Unako nokufaka njenge-Forex EA ukuthengisa egameni lakho, njengoko oku kuhambelana ngokupheleleyo neAvaTrade kunye neMT4. Umrhwebi ulawulwa kakhulu, iimfumba zeelayisensi zolawulo phantsi kwebhanti.
Xa kuziwa kwiiakhawunti zorhwebo zamaSilamsi, i-AvaTrade ithi amanqaku afanayo naleyo yeakhawunti esemgangathweni- kodwa ngumahluko omnye ophambili. Oko kukuthi, akukho nzala okanye ntlawulo ikhethekileyo ihlawulweyo, oko kuthetha ukuba iiakhawunti zayo zekota zihambelana ngokupheleleyo nemigaqo yezemali yomthetho weSharia.
Ukufumana iakhawunti yamaSilamsi evulekileyo kwiAvaTrade, kuyakufuneka uvule iakhawunti esemgangathweni, uyixhase, emva koko unxibelelane neqela lenkxaso yabathengi. Nje ukuba uphonononge, kuya kufuneka usetelwe ngaphakathi kweentsuku eziyi-1-2 zokusebenza. Okokugqibela, i-AvaTrade ixhasa iindlela ezininzi zokuhlawula, kubandakanya ikhadi ledebhithi kunye nocingo lwebhanki.
Iqonga lokurhweba leMT4
Iimfumba zeemali ezixhaswayo
Kuthatha nje iintsuku ezingama-1-2 ukufumana i-akhawunti yamaSilamsi ivuliwe
Ngaba ayixhasi ii-wallets
Ukuba ukwenzile oku, uya kuba nombono ongcono wokuba urhwebo lwe-forex aluyi-halal. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba nangona ingengabo bonke abathengisi be-forex abanikezela ngeakhawunti yamaSilamsi. Kodwa, abanye abathengisi be-forex baya kukulungela ukuyitshintsha kwaye bajike iakhawunti yemveli yokuthengisa i-akhawunti ibe yi YamaSulumane Iakhawunti yorhwebo forex. Ukuba ufumanisa ukuba umrhwebi uzimisele ukwenza oku kunokuba luncedo kakhulu.
Nangona kunjalo, thina kwi-Learn 2 Trade singatsho ukuba kungcono ukuyidlala ngokukhuselekileyo. Oko kukuthi, sinokunamathela kwiifemu zabarhwebi ezikwi-Intanethi ezibonelela ngeakhawunti yamaSilamsi. Ngokwabarhwebi abaqinisekisiweyo esele sixoxe ngabo kwesi sikhokelo, unokuqiniseka nge-100% ukuba uthengisa ngokuhambelana nemigaqo ye-Islam.
Uyivula njani iakhawunti yama-Islamic broker?
Kwiimeko ezininzi, kuya kufuneka kuqala ufumane umrhwebi onikezela ngeakhawunti yamaSilamsi. Kuya kufuneka uvule iakhawunti esemgangathweni, udibane nenani elincinci ledipozithi, emva koko unxibelelane nenkxaso yabathengi ucela ukuba iakhawunti yakho itshintshelwe kwiakhawunti yamaSilamsi. Inkqubo ihlala igqityiwe kwisithuba seentsuku eziyi-1-2 zomsebenzi.
Zeziphi iindidi zemali onokuzithengisa ngeakhawunti yamaSilamsi?
Akukho zimbini zibini zemali ezingavumelekanga xa kuthengiswa ngeakhawunti yamaSilamsi. Kananjalo, uya kuba nokufikelela kwii-majors, abantwana, kunye ne-exotic.
Uyixhasa njani iakhawunti ye-Islamic forex?
Uninzi lwabarhwebi bakunika inketho yokuxhasa ngemali iakhawunti yakho ngekhadi ledebhithi okanye kwiakhawunti yebhanki. Abanye bakwabonelela ngee-wallet zedijithali ezinjengePaypal.
Abarhwebi bayenza njani imali kwiakhawunti yamaSilamsi?
Kwiimeko ezininzi, umrhwebi uza kwenza imali ngokusasazeka. Umahluko phakathi kokuthenga nokuthengisa ngexabiso leasethi.
Kwenzeka ntoni kwimali yobusuku xa usebenzisa iakhawunti yokuthengisa yamaSilamsi?
Ukuba uthengisa ngeakhawunti yamaSilamsi, emva koko akukho mali iya kusetyenziswa.
Yintoni iakhawunti engenakho ukutshintsha?
Iakhawunti engena tshintsho ibhekisa kwiqonga labarhwebi elingayi kukuhlawulisa imali yokulala ubusuku bonke ngokugcina isikhundla sivulekile kwiiyure ezisemgangathweni ezidlulileyo.
Abanye benza, ewe. Kodwa, umrhwebi akufuneki ahlawulise nangaliphi na ixesha imali, inzala, okanye umrhumo.